အာဆငျနယျရဲ့ လကျရှိအခွကေို မေးခှနျးထုတျရငျး လီဗာပူးလျကိုပါ ဆှဲထညျ့သှားတဲ့ အှနျနရီ – Sports A2Z
ဒီနှဈ ၂၀၂၀-၂၁ ပရီးမီးယားလိဂျရာသီအပွီးမှာ အာဆငျနယျအတှကျ ငရဲကခြံခဲ့တဲ့ နှဈတနှဈလို့ သတျမှတျရမှာဖွဈပွီး ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ မနျစီးတီးအသငျးနဲ့ ၂၅ မှတျပွတျကနျြပွီး အဆငျ့ ၈ နရောမှာသာ ရပျတညျနိုငျခဲ့သလို ၁၉၉၅ ခုနှဈနောကျပိုငျး ၂၆ နှဈအတှငျး ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ဥရောပတနျးမဝငျဘူးဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျက ခါးသီးဖို့ အလှနျကောငျးခဲ့ရတယျ။
အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ နောကျဆုံးပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃-၀၄ ရာသီက ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူးကွီး သီယာရီ အှနျနရီကတော့ မိမိတို့အသငျးဟာ ဇယားအလယျနားက သာမနျအလယျအလတျ အသငျးတသငျးဖွဈသှားခဲ့ပွီလို့ လကျရှိဖွဈရပျတှကေို ရှုံ့ခသြှားခဲ့ပွီး အာဆငျနယျအနနေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားရဖို့ လီဗာပူးလျလို နှဈ ၃၀ စောငျ့ခငျြလားလို့ အသငျးကို ပွငျးပွငျးထနျထနျ သတိပေးသှားခဲ့တာပါ။
“အရငျခတျေနဲ့ အခုခတျေကို နှိုငျးယှဉျပွီး ပွောရတာကို ကြှနျတျောမကွိုကျပါဘူး။ ခွားနားတဲ့မြိုးဆကျဖွဈသှားခဲ့ပွီ။ နညျးပညာနဲ့အတူ အရာရာပွောငျးသှားခဲ့ပွီ။ အာဆငျနယျကို ကွညျ့ရငျ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားမရတာ ဘယျနှနှဈရှိပွီလဲ? FA ဖလားနဲ့ ကှနျမွူနတီဖလားတှတေော့ ရခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ အမှတျပေးဖလားခနျြပီယံမဖွဈတာ ဘယျလောကျကွာပွီလဲ?”
“လီဗာပူးလျအသငျးလို နှဈ ၃၀ တောငျ စောငျ့ရဖို့ ဖွဈလာတော့မှာလားဗြာ။ ဒီလိုအသငျးတောငျ အဲဒီလောကျ အခြိနျယူခဲ့ရတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျော့အသငျးကို လမျးကွောငျးမှနျပျေါ အမွနျဆုံးပွနျလာစခေငျြနပေါပွီ။ အနညျးဆုံးတော့ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို တိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ အာဆငျနယျကို ပွနျမွငျခငျြပါပွီဗြာ”
“ကြှနျတျောပွောမယျ။ အာဆငျနယျရဲ့လူစာရငျးက ဝကျဈဟမျးထကျသာတယျဗြာ။ လကျစတာထကျသာတယျဗြာ။ ဒါ​ပမေယျ့ နှဈသငျးစလုံးက ကြျောတကျတာကို ခံခဲ့ရတယျ။ မနျစီးတီး၊ ခယျြလျဆီး၊ ယူနိုကျတကျတို့ကို မကြျောနိုငျရငျတောငျ အာဆငျနယျက အခု အဆငျ့ ၈ ထကျပိုကောငျးအောငျ ရပျတညျနိုငျခဲ့သငျ့ပါတယျ”
“ဒီလိုတှေ ဘာကွောငျ့ဖွဈခဲ့သလဲလို့ အရငျးစဈကွညျ့ရငျ အာဆငျနယျမှာ ခွစှေမျးတညျငွိမျမှုပကျြပွားနတောက အဓိကပွဿနာပါ။ ကောငျးတဲ့နဆေို့ ဘယျအသငျးကိုမဆို အနိုငျကစားပွပါလိမျ့မယျ။ ခွစှေမျးညံ့တဲ့နဆေို့ ဘယျလောကျအဆငျ့နိမျ့တဲ့အသငျးဖွဈဖွဈ သူတို့ရှုံးပွပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ အခုလို အဖွဈဆိုးကို ရငျဆိုငျနရေတာပါ”
“အာဆငျနယျဟာ အမှတျပေးဇယားအလယျအလတျက သာမနျအသငျးတသငျးဖွဈနပေါပွီ။ ဒါကို မွငျတှရေ့တာဟာ ကြှနျတေျာ့အဖို့တော့ ဂနျးနားပရိသတျတယောကျအနနေဲ့ မြားစှာနာကငျြခံစားနရေတယျ။ ခွစှေမျးတညျငွိမျပွီး အဆငျ့မီအသငျးအဖွဈ ပွနျမွငျခငျြပါတယျဗြာ”လို့ သီယာရီ အှနျနရီက အာဆငျနယျရဲ့ လကျတှအေ့ခွအေနကေို သုံးသပျပွပွီး သူ့အမွငျကို ပွောကွားသှားခဲ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။
ZAWGYI: ဒီနှစ် ၂၀၂၀-၂၁ ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအပြီးမှာ အာဆင်နယ်အတွက် ငရဲကျခံခဲ့တဲ့ နှစ်တနှစ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ ၂၅ မှတ်ပြတ်ကျန်ပြီး အဆင့် ၈ နေရာမှာသာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သလို ၁၉၉၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ၂၆ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဥရောပတန်းမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်က ခါးသီးဖို့ အလွန်ကောင်းခဲ့ရတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃-၀၄ ရာသီက ဂန္ထဝင်တိုက်စစ်မှူးကြီး သီယာရီ အွန်နရီကတော့ မိမိတို့အသင်းဟာ ဇယားအလယ်နားက သာမန်အလယ်အလတ် အသင်းတသင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီလို့ လက်ရှိဖြစ်ရပ်တွေကို ရှုံ့ချသွားခဲ့ပြီး အာဆင်နယ်အနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားရဖို့ လီဗာပူးလ်လို နှစ် ၃၀ စောင့်ချင်လားလို့ အသင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် သတိပေးသွားခဲ့တာပါ။
“အရင်ခေတ်နဲ့ အခုခေတ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောရတာကို ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး။ ခြားနားတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ နည်းပညာနဲ့အတူ အရာရာပြောင်းသွားခဲ့ပြီ။ အာဆင်နယ်ကို ကြည့်ရင် ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားမရတာ ဘယ်နှနှစ်ရှိပြီလဲ? FA ဖလားနဲ့ ကွန်မြူနတီဖလားတွေတော့ ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အမှတ်ပေးဖလားချန်ပီယံမဖြစ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ?”
“လီဗာပူးလ်အသင်းလို နှစ် ၃၀ တောင် စောင့်ရဖို့ ဖြစ်လာတော့မှာလားဗျာ။ ဒီလိုအသင်းတောင် အဲဒီလောက် အချိန်ယူခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အသင်းကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် အမြန်ဆုံးပြန်လာစေချင်နေပါပြီ။ အနည်းဆုံးတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အာဆင်နယ်ကို ပြန်မြင်ချင်ပါပြီဗျာ”
“ကျွန်တော်ပြောမယ်။ အာဆင်နယ်ရဲ့လူစာရင်းက ဝက်စ်ဟမ်းထက်သာတယ်ဗျာ။ လက်စတာထက်သာတယ်ဗျာ။ ဒါ​ပေမယ့် နှစ်သင်းစလုံးက ကျော်တက်တာကို ခံခဲ့ရတယ်။ မန်စီးတီး၊ ချယ်လ်ဆီး၊ ယူနိုက်တက်တို့ကို မကျော်နိုင်ရင်တောင် အာဆင်နယ်က အခု အဆင့် ၈ ထက်ပိုကောင်းအောင် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သင့်ပါတယ်”
“ဒီလိုတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သလဲလို့ အရင်းစစ်ကြည့်ရင် အာဆင်နယ်မှာ ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်မှုပျက်ပြားနေတာက အဓိကပြဿနာပါ။ ကောင်းတဲ့နေ့ဆို ဘယ်အသင်းကိုမဆို အနိုင်ကစားပြပါလိမ့်မယ်။ ခြေစွမ်းညံ့တဲ့နေ့ဆို ဘယ်လောက်အဆင့်နိမ့်တဲ့အသင်းဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရှုံးပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အခုလို အဖြစ်ဆိုးကို ရင်ဆိုင်နေရတာပါ”
“အာဆင်နယ်ဟာ အမှတ်ပေးဇယားအလယ်အလတ်က သာမန်အသင်းတသင်းဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါကို မြင်တွေ့ရတာဟာ ကျွန်တော့်အဖို့တော့ ဂန်းနားပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ များစွာနာကျင်ခံစားနေရတယ်။ ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်ပြီး အဆင့်မီအသင်းအဖြစ် ပြန်မြင်ချင်ပါတယ်ဗျာ”လို့ သီယာရီ အွန်နရီက အာဆင်နယ်ရဲ့ လက်တွေ့အခြေအနေကို သုံးသပ်ပြပြီး သူ့အမြင်ကို ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။